विन्डोज शटडाउन वा रिस्टार्ट अनुसूची | ग्याजेट समाचार
त्यहाँ कामहरू छन् जुन एक व्यक्तिले केहि घण्टा सम्म चलेको कार्य समाप्त गर्नका लागि आफ्नो व्यक्तिगत कम्प्यूटर छोड्नु पर्छ। यो मान्दै यो पहिले नै आधी रात हो र हामी व्यावहारिक रूपमा हामीले अब अनुप्रयोगमा बिल्कुल केहि गर्न जरूरी छैन तर यसको सट्टा, हाम्रो विन्डोज कम्प्युटर कार्यलाई अनुमति दिदै, हामी केहि विकल्पहरू प्रयोग गरेर कम्प्युटरलाई निश्चित समय पछि बन्द गर्न आदेश दिन सक्दछौं।
हामीले तल उल्लेख गर्ने उपकरणहरूले हामीलाई सहि समयमा प्रोग्राम गर्न सक्षम हुन मद्दत गर्दछ जुन विन्डोजको साथ निजी कम्प्युटर बन्द गर्नुपर्नेछ, राम्रोसँग गणना गर्नुपर्नेछ किनकि अन्यथा यदि हामी कार्य समाप्त गर्छौं भने ( कम्प्युटर खोल्नुहोस्), यो धेरै पछि समाप्त हुन्छ। जे भए पनि, विकल्पहरूको साथ हामी तल उल्लेख गर्न सक्नेछौं तपाईं प्राप्त गर्न सक्दछौं विन्डोजलाई हाइबरनेसनमा जान आदेश दिनुहोस्, त्यसोभए उपकरण पूर्ण रूपमा बन्द नभएको कारण काम हराउने छैन।
1. बन्द टाइमर दृश्य
यस उपकरणमा "भिस्टा शटडाउन टाइमर" नामक एक राम्रो विकल्प भेट्टाइन्छ, किनकि यो विन्डोज २००० देखि पछिल्लो अपरेटि systems सिस्टमसँग उपयुक्त छ। इन्टरफेस पूर्ण रूपले उपयोगकर्ता मैत्री हो र यसैले, त्यहाँ त्यस्तो एक क्षण पनि आउँदैन जसमा हामी यसको केहि कार्यहरूसँग अलमलमा पर्दछौं।
केवल चीज मात्र तपाइँले गर्न चाहानुहुन्छ शीर्ष पट्टीमा उनीहरूको सम्बन्धित आइकनहरू मार्फत कुनै प्रकार्यहरू चयन गर्न; यसको मतलव तपाईले छनौट गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटर लक गर्नुहोस्, हाइबरनेट, निद्रा, पुनः सुरु गर्नुहोस् वा केवल यो बन्द गर्नुहोस्। प्रत्येक छनोटसँग केही थप विकल्पहरू तल देखा पर्दछ, जुन तपाईंलाई समय परिभाषित गर्न मद्दत गर्दछ जहाँ कार्य कार्यान्वयन गरिनु पर्छ; थप रूपमा, अनुप्रयोगले तपाईंलाई निश्चित समय र विशेष दिन परिभाषित गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईं पनि यो कार्य सम्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ।
2. बुद्धिमान स्वत: बन्द
यद्यपि हामीले माथि उल्लेख गरेको विकल्पमा पूर्ण भिन्न ईन्टरफेसको साथ, बुद्धिमान् स्वत: बन्दले हामीलाई पनि यस्तै कार्यको लागि सक्षम हुन सक्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ।
बायाँ तिर तपाईले कसैलाई पनि छान्नुपर्नेछ, जबकि दायाँ क्षेत्रबाट तपाईले सहि समय र मिति तोक्न सक्नुहुनेछ जुन यो हुन्छ। तपाईं परिभाषित गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं यो अपरेशिन दैनिक रूपमा वा दिनको केही खास समयमा गर्न चाहनुहुन्छ।
3. एयरटाइक स्विच अफ
अर्को चाखलाग्दो विकल्प प्रयोग गर्नका लागि "एयरटाइक स्विच अफ" हो, जहाँ हामीसँग एक सरल र न्यूनतम इन्टरफेस छ जुन, तथापि, हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ। पूर्ण सुविधाहरू प्रयोग गर्न जब यस प्रकारको प्रोग्रामिंग गर्दै।
तपाईं परिभाषित गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं यो सुम्पिएको कार्य सम्पन्न हुन चाहनुहुन्छ भने साप्ताहिक वा दैनिक र एक विशेष समय मा, यो इन्टरफेस को माथिल्लो क्षेत्र बाट। तपाईं कार्यको प्रकार पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हो, यदि तपाईं कम्प्युटरलाई पुन: सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, बन्द गर्नुहोस्, अवरुद्ध गर्नुहोस् वा अन्य कुनै समान।
अघिल्लो विकल्पहरूको तुलनामा अधिक आकर्षक र बिभिन्न इन्टरफेसको साथ, पहिलो उदाहरणमा «TimeComX Basic us ले हामीलाई सानो प्रयोगको सम्भावना प्रदान गर्दछ। बाँकी समय स्टपवाच एक विशेष कार्य गर्न को लागी छुटेको छ।
एउटा धेरै रोचक सेक्सन तल्लो भाग हो, जहाँ तपाईं यस उपकरणलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ "स्क्रीनशट" लिनुहोस् सम्पूर्ण डेस्कटप वा उपकरणको त्यो क्षणमा, तोकिएको कार्य कार्यान्वयन अघि seconds० सेकेन्ड।
5. एएमपी WinOFF
हामीले अन्तिमको लागि अन्तिम विकल्प छोडेका छौं यसको ईन्टरफेस व्यावहारिक रूपमा कत्तिको जटिल छ त्यसका कारण। हामी यहाँ आश्वस्त हुन सक्छौं त्यहाँ अनुकूलन गर्न बिल्कुल सबै छ एउटा काम जस्ता हामीले सुरुबाट नै उल्लेख गर्दै आएका छौं।
सबै कुरा बिभिन्न ट्याबहरूको आधारमा संरचना गरिएको छ र माथिको फंक्शन बार द्वारा समर्थित छ। तपाईं विकल्पहरूको एक ठूलो संख्या संग खेल्न सक्नुहुन्छ जुन प्रत्येक ट्याबमा देखाईएको छ, जुन तपाईंलाई निश्चित रूपमा मद्दत गर्दछ कार्यक्रम एक विशेष समारोह काममा निर्भर गर्दै तपाई कुनै पनि समय व्यक्तिगत कम्प्युटरमा गरिरहनु भएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » Windows विकल्प विन्डोज शटडाउन वा पुनः सुरुका लागि तालिका